Five wounded after Muslim militants from Rakhine ambush Myanmar army truck - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Jan 07 2018 03:06 AM
Bengali Muslim insurgents ambushedamilitary vehicle in Myanmar’s Rakhine State, wounding five members of the security forces, state media and officials said, and the rebels claimed responsibility for the rare attack.
“Yes, ARSA takes responsibility for the latest military movement,” the spokesman said throughamessaging service.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်သွေးကြွမွတ်ဆလင်တွေက မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ကားတစီးအား ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ ၅ ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာက ဆိုပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို စစ်သွေးကြွတွေက ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ၀န်ခံပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ။ ARSA က ဒီနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ခဲ့တာပါလို့ ARSA ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။
Also tagged with one or more of these keywords: rakhine